Hagayya 13 bara 2012
Gara: Dhaabota ABO hundaaf
Tokkummaa Humnoota Bilisummaa Oromiyaa (ULFO)fi
Qabsa’ota Oromoo hundaaf.
Irraa: Waltajjii Marii Oromoo
Dhimmi: Yaamicha gurmuu Oromoo cimsuu
Akkuma hundi keenya beeknu, ummanni Oromoo edda abbaa-biyyummaa isaa humnaan sarbame jalqabee mirga isaa deebisee gonfachuudhaaf guyyaan inni qabsoo irraa ofqabe hin jiru.
Ummanni keenya mirga uumamaan qabu kana deeffachuudhaaf qabeenya, humna, dandeettii fi hunda kan caaluu lubbuu isaayyuu qabsoo kanaaf qusatees hin beeku.
Akka marii fi gamaaggama Waltajjii Marii Oromootti (WMO), qabsoon kun bakka gahuu kan dadhabeef cimina diina keenya qofa osoo hin taane tokkummaa dhabuu dhaabota Oromootiifi. Sababa dhibdee ta’an keessaa jaarmiyaa ititee fi rakkina jiruu mariin hikkachuu aadaa godhachuu dhabuun keenya qabxiwwan gurguddoo jiran keessaa kan olaanoo ta’uun waan haalamu nutti hin fakkaatu.
Aadaa rakkina jiru akka Oromootti ilaaf-ilaameedhaan hikkachuu dhabuun ammo moora qabsoo Oromoo tasgabbii dhabsiisuu bira kutee dhaabonni maqaa ABOn sosohan qofti bakka sadii ykn afuritti akka facahan gumaacheera.Tasgabbii dhabuun moora qabsoo Oromoo kun ammo dhaabonni Oromoo diina irratti qiyyaafachuu dhiisanii wal irratti akka qiyyaafatan karaa saaquu bira taree diina dhiisanii wal irratti diina akka tahan godheera.Wal irratti ololuu fi wal irratti qiyyaafachuun kun ammo qabsoo Oromoo duubatti harkisuu bira dabree laamshessa jira. Akka WMOtti dhaabotiin Oromoof qabsa’an heddummaachuun mata isaatti rakkina tahee osoo hin tahin diina dhiisanii wal irratti ololuu fi qiyyaafachuun qabsoo Oromoo kiyyoo cimaa keessa galcheera.
Kiyyoo kana keessa bahuudhaaf ammoo wal tahuun barbaachisaa fi murteessaa akka tahe ummanni keenya sududaan, “artistoonni” keenya ammoo sirbaa fi geerarsaan fedhii fi hawwii ummata keenya kana ifaaf ifatti hubachiisaa turaniiru, har’as ittuma jiru. Barbaachisummaa tokkummaa Oromoo, Oromoo qofa osoo hin taane alagaan baargamaa dhufeyyuu ganna dhibba afur dura hubatee akkas jechuun nu hubachiiseera. ”If God had not blinded them (Oromos), there would not have been an inch of land in the empire, of which they were not the masters” Monel de Almeida, a Jesuit priest who visited Ethiopia in the 1620s.
Dhaabonni Oromoo garuu har’a illee ganna 400 booda ijaa-jaamuu kana waan hubatanii wal irratti ololuu fi wal irratti qiyyaafachuu dhiisanii tokkummaadhaan diina irratti qiyyaafachaa hin jiran. Haala yeroo ammaa mul’ataa jiru kana irraa yoo ilaallu ijaa-jaamuu sana keessaa dhiyoottis waan bahan hin fakkaatu.
Egaa nuti, hirmaatotni Waltajjii Marii Oromoo (WMO), rakkinoota armaan olitti tuqaman furmaata itti gochuudhaaf yeroo adda addaa yaamicha marii fi tokkummaa dhiyeessaa turreerra. Hangasitti ammoo karaa keenya Yoo tokkummaan dhibellee olola adda addaa dhaaba Oromoo kam irrattiyyuu hin oofnu, nu irratti oofamullee deebii hin kenninu kan jedhu ummata keenyaa hubachiifneerra.Ummanni keenyas tarkaanfii jalqabaa kana fudhachuu keenyatti gammadee olola dulloomaa nu irratti oofamaa jiru kanaf bakka akka hin kennine nu hubachiisuudhaan murtii keenyatti akka cicinuuf deebii gaarii (“feed back”) nu kennaa jira. Ammas olola wal irratti oofuun fi wal irratti qiyyaafachuun diinota keenya yoo fayyade malee qabsoo Oromoo akka hin fayyadne hunda keenyaaf ifa ta’uu qaba.
Kanaaf nuti, hirmaatotni WMO, mirga Oromoo gonfachiisuu kan dandeenyu yoo diinota keenya dura tokkummaadhaan dhaabbanne qofa tahu mamii tokko malee ijaa hubanneef haala duree tokko malee akka mari’annu yaamicha belbeltuu seena qabeessa kan obbolummaa fi kan lammummaa isiniif dhiheessina
Odeessa dabalataa ykn qunnamtiif
Waltajjii Marii Oromoo (WMO)